महानगरपालिकाले ल्यायो ‘विउ एटिएम’
ललितपुर- ललितपुर महानगरपालिकाले आइतबारदेखि विउ एटिएम (सिड अटोमेटेड टेलर मेसिन) सञ्चालनमा ल्याएको छ । दैनिक सेवा लिने १५ सय सेवा गा्रहीलाई लक्षित गर्दै महानगरले विउ एटिएम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
मेसिनबाट सेवा गा्रहीहरुले ३६ किसिमका मैसमी तरकारी तथा फूलका विउहरु आपूर्ति गर्न सक्ने छन् । सुरुमा महानगरिय तर अहिले मेसिन प्रयोगकर्ताको चाप वृद्धि भएको छ । भारतमा प्रचलनमा रहेको यो मेसिन नेपालमा भने पहिलो पटक प्रचलनमा आएको हो ।
सेवा गा्रहीहरुले मेसिनको स्क्रिनमा रहेको प्रेस बटन दबाई विउको किसिमलाई वालीको फोटोमा छनोट गरी देखिएको मुल्य बराबरको विउको प्याकेट प्राप्त गर्न सक्ने छन् । २०, ५० र १०० मुल्य रहेको विउ प्राप्तिका सेवा गा्रहीले सफा कागजी नोट मेसिनमा छिराएर विउको प्याकेट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षि मात्रालयका कृषि सचिवले डा. युवकधोज जिसीले नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित रहेको बताए । खाने मुख तीन गुणा वढ्ने तर जमिन घट्दै जाने हो भने वढ्दो जनसंख्याको मागलाई पुर्ती गर्न नसकिने डा. जिसीले बताए ।
ललितपुर नगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले मेसिनले सक्कली विउ प्रदान गर्ने दाबी गरे । ‘यसमा कुनै समस्या हुने छैन् । विउबाट संकलित रकमको २ प्रतिशत हिस्सा महानगरको राजस्वमा प्राप्त हुनेछ । यो मेसिनको काम र नतिजा हेरेर आगामी दिनमा २९ वटै वडाहरुमा सेवा दिने नीतिगत व्यवस्था भएको छ,’ मेयर चिरिबाबु महर्जनले भने।